Midowga Musharixiinta oo kulan la yeelanaya Wakiilada Beesha Caalamka - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta oo kulan la yeelanaya Wakiilada Beesha Caalamka
Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha eek u sugan Magaalada Muqdisho ayaa waxaa la filayaa in ay shir la yeeshaan wakiilada Beesha Caalamka ee ku sugan Xerada Xalane ka hor banaanbaxa Jimcaha oo ay islaamiyeen musharixiinta.
Kulanka oo ku qabsoomaya Aalada Fogaan Aragka ee ( ZOOMKA) ayaa wararka aan helnay waxaa ay sheegayaan in ay ka wada hadlayaan xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka Soomaaliya oo weli muran uu ka taagan yahay.
Xubnaha Xubnaha Beesha Caalamka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ay cadaadis saarayeen Saamileyda siyaasadeed ee dalka si muran ka doorashada xal looga gaaro, iyaga oo la kulmay madaxda dowladda, dowlad Goboleedyada iyo Musharixiinta Madaxweynaha.
Wararka la helay ayaa sheegaya in Xubnaha Midowga Musharixiinta ay Beesha Caalamka u gudbinayaan xaaladaha kajira dalka iyo in aysan ku qanacsaneyn in arrimaha doorashooyinka loo daayo kaliya Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmajo.
Kulanka Midowga Musharixiinta iyo wakiilada Beesha Caalamka ay yeelanayaan ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Jimcaha todobaadkaan loo balansan yahay banaanbax ay horboodaayaan Musharixiinta oo looga soo horjeedo Maxamed Cabdullaahi Farmajo..
Previous articleMadaxweyne laftagareen oo kulan la qaatay guddiyada uu shirka uga socdo Baydhabo